Dhalashadii Caneb iyo dhismihii Qoyska…………. 8
Booqashadaydii Meygaagle………………………., 11
Xagaa-bixii iyo xanuunkii Caneb………………….. 14
Cabdi Muxumed Diiriye (Bon Famille)……………. 16
Booqashooyinkii SNM-ta……………………………… 23
Sakaraadkii Caneb…………………………………. 24
Jaamac Caabbi Cawad………………………………. 33
Imaam Yaxye Xaaji Ibraahin Warsame…………… 33
Aabbahay Aw Yuusuf Ducaale Caynaan………… 38
Caneb aan u soo dego……………………………. 43
Aaskii iyo baroor-diiqdii Caneb……………………. 44
Gogoshii iyo tacsidii………………………………… 45
Xaajiya Habboon Cabdi Muxumed:………………. 50
Damaq iyo dareen-curin………………………….. 50
Gebegebada sheekada:…………………………… 58
Laba arrimood ayaa xusuus gaar ah igu lahaa intii shirku socday. Maalin ayaan e-mailkayga furay. Wiil aan Cabdillaahi Cabdi Shube sawirkiisa weydiistay ayaa ii soo jawaabay. Baadi-soocda e-mailkiisa ayaa ahayd midgaanyare@……… Wallaahi hoosta ayaan uga duceeyay. Maalin kalena nin ayaa nagu qaaday baabuur Pajero ah. Aniga iyo Aamina oo Guddida Xuquuqda Aadamaha Somaliland madax u ah ayaanu ahayn. Xagga danbe ayaanu fadhiisannay oo in cid kale na raacayso ayaanu moodaynay. Labadayadii ayuu nala dhaqaaqay. Markii aanu hudheelkii ka baxnay ayuu dib noo soo jalleecay isaga oo aniga ila hadlayay. Ku-ye: “Ma reer Kiiniya ayaad tahay?” Markaas ayaan ku idhi: “Maya ee reer Somaliland.” Wuxu igu celiyay: “Ma Isaaq ayaad tihiin?” “Haa,” ayaan ugu jawaabay. Isagii ayaan ku noqday: “Adiguna?” Markaas ayuu iigu jawaabay: “Muuse Dheriyo oo reer Tallaabo-cadde ah.” “Lillaahi darrak,” ayaan ku idhi. Bal maxay ku caayi haddii uu ab, isir iyo laan-dheeriba sheegtay. Bal adba!
Xusuusta walaal aan xiskayga ka tirmayn inta aan xayga ahay – Bon Famille
“Waa ilaa 1957kii. Wuxu aabbo ii sheegay in uu bilaabay sidii uu isagu wax isu bari lahaa. Wuxu ii sheegay in uu wax badan ku bartay “self teaching”. Beryihii danbe ayay gaaladu imtixaan ka qaadday waanu ku guulaystay. Haddaba waxaan hayaa shahaadadihii iyo imtaxaannadi u aabbo qoray ee uu maray 1958kii iyo dhibcihii uu ku helay. Aabbo, si layaab leh ayuu Af Faransiiska u yaqaannay oo annaga oo dugsiyada ku dhiganna ayuu naga sixi jiray. Wuxu nasiib u yeeshay in uu wax baro u afarta carruurta ugu waaweyn, annagana iyaga ayaa wax na sii bari jiray oo aabbo noo beddelay. Aabbo, direyska wuxuu dhigay 1977kii isaga oo ahaa ‘Adjudant- chef’. Ka dibna wuxu furtay meel baabuurta lagu barto kii ugu horreeyay ee laga furo magaalada Jabuuti oo la odhan jiray ‘Auto-ecole Rex’. Waxaay shuraako ku ahaayeen oday Faransiis ah oo askari ahaan jiray oo la odhan jiray Mr. Granier.”
“Aabbo, qof gacan furan oo aan maya aqoon ayuu ahaa. Waxaad weydiisato wuu ku siin jiray. Aabbo, hablahana si gaar ah ayuu u jeclaa, anigana markii aan yaraa waxaan xusuusta in uu mar walba wax ii soo qaadi jiray oo uu baco iigu keeni jiray ka dibna uu odhan jiray mee ‘jiirki’ isaga oo kaftamaya. Aabbo, reer Jabuuti aad ayay u yaqaaneen oo magaciisu wuu dheera. Xataa carruurta magaalada ayaa taqaannay. Waxa loo yaqaannay “Bonfamille”. Wuxuu kula baxay magacan mar uu bukooday oo uu dhakhtarka galay oo siyaaradii iyo booqashadii kala go’i weyday ayay Faransiiskii yaabeen oo yidhahdeen ninkani dad wanaagsan ayuu ka dhashay: ‘Bonfamille’.
Xusuusta walaal aan xiskayga ka tirmayn inta aan xayga ahay – Dildillaac furaashkii
Xusuusta walaal aan xiskayga ka tirmayn inta aan xayga ahay – Qormadan Yaxye
Annaba googo’an ma guranno,
Hooyo waxay ka soo noqotay Hargaysa 24kii Oktoobar 2010kii, toddobaad ka dibna waxay ka cabatay caloosha. 13kii Noofambar waxa hooyo la dhigay dhakhtar Gargaarka Degdegg ah (Eemergency) oo “Halas” la yidhaa. Irbado matagga joojiya ayaa lagu muday ka dibna waanu ka soo saarnay. Habeenkii Ciiddii Carrafo ka horreeyay ee 15kii Noofambar 2010kii, hooyo xanuunki ayaa ku soo noqday maalintii Ciiddana waa ay jiiftay oo tabcaan ayay ahayd. Markii ay ka soo raysan weyday ayaa 28kii Noofambar 2010kii la dhigay cisbitaalka Peltier.”
Adoo laba go’ iyo shaal leh,
Malaa’ig ha kuu malmaliso,
“Horto, abti hooyo Ilaahay ha u naxariisto e’ wax urur ah kuma ay jirin. Waxay aad ula socon jirtay wararka adduunka oo ay TV-ga inta badan ka daawan jirtay. Ka dibna markaanu u nimaado ayay nooga warami jirtay, annaga oo la yaabban siday wararka u qaybi jirtay. Jabuuti aad iyo aad ayay u jeclayd. Weliba deggenaanshaheeda iyo horumarkeeda. Nafteedu waxay raalli ka ahayd in ay kuleylaha u xagaa-baxdo Somaliland, gaar ahaanna Gebilay. Waxay ku taami jirtay in ay caano-lo’aad soo dhanto, hilib daray ah soo cunto, hawo caafimaad qabtana soo qaadato. Xagaagii meel ay Gebilay ku doorsataa ma jirin. Hooyo “origin-keeda” iyo halka ay ka soo jeedday aad ayay u jeclayd. Had iyo jeer waxay igu odhan jirtay inta aan noolahay Somaliland meel kale uga kici maayo. Waxaay odhan jirtay Laba-nuux oo ahayd xaafaddii ay Hargeysa kaga dhalatay iyo ila Sheedaha ayaanu orod ku tagi jirnay oo aanu Xayramad ka soo guran jirnay .
“Guriga Gabood alaabta taalla waxa ugu da’ weyn kabadh ka soo hadhay arooskii hooyo iyo aabbo ee 1961kii oo laba ferdadood oo loox ah. Hooyo waxay igu tidhi waa kaan ku guri gallay. Alaabtan immika guriga taalla ee ay hooyo kaga dhimatay, waxay u diratay Sucuudiga 1984kii oo Cali-qodaal ayaa u soo iibiyay, isagana naxariistii Janno Ilaahay ha ka waraabiyo e’.”
“Hooyo waxay aad u jeclaad subeeciyadaha oo mid ayay intan danbe huwan jirtay, haddana aniga ayaa xusuus u haysta. Waa ay xarrago badnayd, xinnahana had iyo jeer faraha iyo timaha kama ay deyn jirin. Xata cusbur ayay wejiga marsan jirtay. Marka aanu Gebilay tagno ayaan ku odhan jiray hooyo waa qabaw ee iska daa. Waxaay igu odhan jirtay weliba haddii uu roob da’o, xareedda ayaan iskaga maydhayaa.
“Abti, horto waxaan xusuustay hooyo Ilaahay ha u naxariisto e’ in ay Jimciyad dumarka reerku samaysteen ay ku jiri jirtay oo ay lacagta ururin jirtay. Abti, hooyo waxay haysan jirtay keyd cajalado ah (audio) oo ay dhegaysan jirtay. Waxay u badnaayeen gabayo “Timacade” iyo cajalad ay ku duubnaayeen gabay abti Axmed u soo tiriyay geeridii aabo. Hooyo had iyo jeer marka ay salaadda tukato waa ay ducayn jirtay, waxaanay hal-hays u lahayd: “War-san, weedh-san, wax-san, waa-san Ilaahow noo bari. Saw- sawda wareegaysa Ilaahow naga salaamad yeel. Hooyo, waxay ku wardisan jirtay wardi haybe ah oo ayeeyo lahaan jirtay.
Xusuusta walaal aan xiskayga ka tirmayn inta aan xayga ahay – Gebegebada sheekada
← Magaca Heesta: Xisbiyada Ereyadii: Boobe Yuusuf Ducaale
Mashiinkii Rogista waraaqaha ee SNM: (Qormo xiiso badan) →